Tag: hafatra an-tsoratra | Martech Zone
Tag: hafatra an-tsoratra
TxTFi: Alefaso ny famerenana amin'ny laoniny ny varotra amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra
Talata, Septambra 29, 2020 Talata, Septambra 29, 2020 Douglas Karr
Ny fandefasana indray amin'ny alàlan'ny hafatra mandeha ho azy dia mora kokoa ary mahomby kokoa amin'ny fahazoana ny baiko faharoa na fahatelo amin'ny tobin'ny mpanjifanao efa misy. Hetezo ny tabataba rehetra - avelao ny mpanjifanao hanafatra ny toerana sy ny fomba ahitan'izy ireo aina. Miaraka amin'ny TxTFi for Shopify dia tsy mila manao na inona na inona ianao. Mandeha ho azy daholo. Apetraho fotsiny dia hadinoy. Ny baiko SMS ho an'ny Shopify TxTFi dia tafiditra ao amin'ny Shopify ho azy ary manatona ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny
Alatsinainy, Aogositra 17, 2020 Alatsinainy, Aogositra 17, 2020 Douglas Karr
Na fanamarinana anton-javatra roa na fanaovana famandrihana sakafo hariva, manomboka mahatsikaritra aho fa mahazo aina kokoa amin'ny fampiasana fandefasan-kafatra an-tsoratra (SMS) noho ny tamin'ny taona vitsivitsy lasa aho. Heveriko fa tsy izaho irery… ny mpanjifa sy ny orinasa dia faly faly mandefa sy mahazo sms fa tsy manelingelina ny antso an-tariby. Ny olana anefa dia ny fomba fitantanana ireo fifandraisana rehetra ireo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Eo no misy ny sehatry ny fandefasan-kafatra
Marketing amin'ny finday: Ataovy manokana
Alakamisy, May 29, 2014 Douglas Karr
Ny fanadihadiana an-tserasera an'i Hipcricket tamin'ny 2014, ny toe-tsain'ny Consumer momba ny Marketing amin'ny finday, dia natao tamin'ny volana aprily 2014 ary mikendry olon-dehibe 1,202 6 any Etazonia. Ny fanadihadiana dia nahitana fa efa mampiasa finday ny mpivarotra ary mamaly ny mpanjifa. Ny roa ampahatelon'ny mpamaly dia nilaza fa nahazo hafatra an-tsoratra avy amin'ny marika iray izy ireo tao anatin'ny XNUMX volana lasa ary efa ho ny antsasaky ny mpanjifa no nahita fa mahasoa ilay hafatra an-tsoratra. Na izany aza, tsy mahatratra ny marika ireo mpivarotra raha ny amin'ny fandefasana hafatra mifandraika sy voafaritra manokana, izay
Torohevitra tsara indrindra hanoratana hafatra SMS mahomby
Talata, Febroary 11, 2014 Alatsinainy Janoary 16, 2017 Douglas Karr
Mahagaga ny valin'ny valiny sy ny fiovam-po amin'ny hafatra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Ary io no hany fampitaovana fandefasan-kafatra eran'izao rehetra izao satria ny sehatra hafa rehetra dia misy olana momba ny sivana sy ny fifanarahana. Ity infographic avy amin'ny TextMarketer ity dia manondro singa lehibe vitsivitsy amin'ny hafatra ara-barotra mahomby amin'ny SMS: Atombohy amin'ny fisintomana ny saina hahasarika ny mpamaky sy ny vakiteny. Aza mampiasa fanafohezana fandefasana hafatra - tsy mahatakatra azy ireo ny ankamaroan'ny mpampiasa finday. Ataovy fohy izany
Tuesday, February 11, 2014 Monday, January 16, 2017